Obodo mara mma na Sierra de Madrid: ọdịdị na ihe ncheta | Akụkọ njem
Louis Martinez | 05/01/2022 11:00 | Ecotourism, España
Chọta obodo mara mma na Sierra de Madrid ọ ga-adịrị gị mfe. N'ihi na ogige a bụ ugwu ugwu na-enye gị obodo ndị jupụtara na ịma mma ma dị na mbara ala mara mma. Ọ dị n'ebe ugwu ọwụwa anyanwụ nke obodo Madrid Autonomous Community na, n'aka nke ya, mejupụtara ọtụtụ ugwu ugwu, ọkachasị ndị nke obodo. Guadarama, Malagon, Nkuku na Cabrera.
Mpaghara a buru ibu nwere ogige ntụrụndụ mba dịka nke nke ya Ugwu ugwu Guadarrama, ala ịta ahịhịa dị ka nke anyi bu sirira, ebe etiti ugwu dịka Osimiri Lozoya na elu ihe karịrị puku abụọ mita dị ka ndị Peñalara kacha elu ma ọ bụ Ugwu nke Carnations. Na, tinyere ihe a niile, ị nwere ụzọ ụkwụ na ebe ntụrụndụ ski dị ka Navacerrada ma ọ bụ Valcotos. Ma, n'elu ihe niile, ọtụtụ obodo na-echebe niile amara nke ime obodo na na ha bụ ezigbo ihe ncheta n’ime onwe ha. Na-enweghị oge ọzọ, anyị ga-atụ aro obodo ndị a mara mma na Sierra de Madrid.
2 Rascafría, bụ́ obodo ọzọ mara mma na Siera de Madrid
3 Patones si n'elu
4 Manzanares ndị Real
6 Horcajuelo nke Sierra
7 La Hiruela, otu n'ime obodo kacha mma echekwara na Sierra de Madrid
8 Ndị Berrueco
9 Gorge ugwu
Alcázar nke Buitrago del Lozoya
Anyị na-amalite njem anyị n'ebe ugwu nke Obodo Madrid iji kwụsị n'obodo a mara mma nke dị n'etiti Cabrera na Rincón ugwu. Ọ ga-eju gị anya, nke mbụ, site na ya ogige mgbidi malitere na narị afọ nke XNUMX.
Ugbua na mpaghara, ị ga-ahụ Alcazar, wuru na narị afọ nke XNUMX na-ejikọta ụdị Gothic na Mudejar, na ndị Chọọchị Santa María del Castillo, nke nwere nnukwu ọnụ ụzọ Gothic mara mma. Ọzọkwa na-akpali bụ Arrabal akwa, nke a zụlitere n'oge emepechabeghị anya.
Ọzọkwa, n'okpuru ugwu nke obodo bụ ụlọ ọhịa, ihe owuwu nke narị afọ nke XNUMX nke e wuru maka Dukes nke Infantado dị ka ụlọ obibi n'ụdị nke ndị Italy na-ese ụkpụrụ ụlọ. Andrea Palladio. Ma, eleghị anya, ihe kasị ịtụnanya banyere Buitrago del Lozoya bụ ya Iclọ ihe ngosi nka Picasso. N'ụzọ doro anya, onye na-edozi isi nke onye na-ese ihe si n'obodo ahụ ma nyefee ya ọrụ ndị o nyere ya iji mepụta ihe ngosi a. Ọ nwere ihe dị ka iri isii nke onye omenkà Malaga raara onwe ya nye.
Rascafría, bụ́ obodo ọzọ mara mma na Siera de Madrid
Ebe obibi ndị mọnk nke Santa María del Paular
Ọzọkwa na ndagwurugwu Lozoya bụ obodo a bụ ọnụ ụzọ nke Peñalara eke ogige, nwere ọtụtụ njem njem na ugwu. Site na ha, ị nwere ike iji moraine na cirques rute ọdọ mmiri glacial a ma ama.
N'otu oge na villa, anyị na-adụ ọdụ ka ị gaa na Parish Church nke San Andrés Apóstol, wuru na narị afọ nke XNUMX, ndị Ụlọ ọgwụ ochie, nke XIV, na ndị akwa nke mgbaghara. Site na nke a, kwa, ị ga-eru ndị na-amanye Ebe obibi ndị mọnk nke Santa María del Paular. Ewubere ebe obibi ndị mọnk a na njedebe nke narị afọ nke XNUMX, n'agbanyeghị na o nweela ọtụtụ mweghachi. Ụka na-apụta na mgbagwoju anya, ma akwa ọla ya bụ ihe a na-akpọ Usoro nke Cartujana nke cloister. Ọ na-agụnye ihe osise iri ise na anọ nke Vincent Carducho, nke dịkọrọ ndụ Velázquez, na akụkọ ihe mere eme nke usoro Carthusian.
N'ikpeazụ, si ebe obibi ndị mọnk, hiking ụzọ na-ewe gị ka Mmiri mmiri Purgatory, otu mmiri mmiri na-asọba n'osimiri Aguilón nke dị egwu n'ezie.
Anyị enweghị ike ịgwa gị banyere ọmarịcha obodo ndị dị na Sierra de Madrid na-ekwughị banyere Patones de Arriba. N'ihi na obodo a bụ ihe ncheta n'onwe ya. Ya Slate ụlọ, ọ bụ ihe atụ zuru okè nke oji architecture nke Sierra de Ayllon, nke mere ka a kpọpụta ya dị ka saịtị Mmasị Omenala.
Mana Patones na-enye gị ọtụtụ ihe ịhụ. Nke mara mma uka nke san jose Ọ e wuru na narị afọ nke iri na asaa na hermitage nke Virgin nke Oliv Ọ malitere na narị afọ nke XNUMX ma dị na ụdị Mudejar Romanesque. Nnọọ nso nke ikpeazụ bụ Olive ponton, mmiri mmiri e wuru n’oge Isabell nke Abụọ iji nye obodo Madrid mmiri. Nakwa ihe ochie na saịtị nke Castro Dehesa de la Oliva, malite tupu oge Rom.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na-amasị gị caving, na Reguerillo ọgba Ọ bụ oghere kacha mkpa na obodo Madrid niile. Agbanyeghị, emechiri ya ugbu a. Iji banye ya, ịchọrọ ikike pụrụ iche.
Manzanares ndị Real
Castillo de los Mendoza dị na Manzanares, otu n'ime obodo mara mma na Sierra de Madrid
Ihe ọzọ dị ịtụnanya n'etiti ọmarịcha obodo ndị dị na Sierra de Madrid bụ Manzanares. Ọ dị n'ikpere mmiri nke Mmiri mmiri Santillana na n'ụkwụ nke nke pedriza, ebe zuru oke maka ịme njem na ịrị elu. Ihe a niile na-echefughị Snowdrift nke Countess, ebe a mụrụ osimiri Manzanares.
Ma obodo ahụ nwekwara ọmarịcha ihe ncheta. Nnukwu akara ya bụ Nnukwu ụlọ Mendoza, wuru na njedebe nke narị afọ nke XNUMX, mana nke dị na ọnọdụ zuru oke. N'ime, ị nwere ike ịhụ nchịkọta tapestries na ihe ngosi nka gbasara nnukwu ụlọ ndị Spen.
Ọ bụghị naanị Manzanares nwere. Ị nwekwara ike ịhụ foduru nke nnukwu ụlọ ochie, nke nanị mgbidi abụọ fọdụrụnụ. N'akụkụ nke ya, chọọchị nke Lady anyị nke snow A na-eche na a ga-ewu ya na njedebe nke narị afọ nke XNUMX na mmalite nke XNUMXth. Ọ na-ejikọta Romanesque, Gothic na Renaissance atụmatụ.
N'ikpeazụ, na ụzọ La Pedriza, ị ga-ahụ Hermitage nke Nwanyị anyị nke Peña Sacra, nke e wuru na ngwụcha narị afọ nke iri na isii na mmalite narị afọ nke iri na asaa.
Plaza Mayor nke Torrelaguna
N'okpuru ugwu nke Sierra de la Cabrera bụ obodo a, nke a ma ama maka ịbụ ebe ọmụmụ nke Kadịnal Cisneros. Kpọmkwem n'aka ya ka ha ji akụkụ dị mma nke ihe ncheta Torrelaguna nwere. N'ime ndị a, ihe dị egwu Churchka parish nke La Magdalena, nke ụdị Gothic yana ihe ngosi Baroque na Plateresque. Ọzọkwa, ndị Abbey nke Ndị Nne Ndị Nne Franciscan Achụpụrụ o nwere ọmarịcha uka akpọrọ Juan Gil de Hontanon na Renaissance mausoleum.
Ị nwekwara ike ịga na Torrelaguna la Hermitage nke Nwanyị Nwanyị nke Ọnọdụ, site na narị afọ nke iri na anọ, ọ bụ ezie na eweghachiri ya na nke iri na asatọ. Ọ nwere ihe oyiyi nke onye nlekọta senti nke obodo ahụ.
Banyere ihe owuwu obodo, ndị Ụlọ Nzukọ Alaeze, site na 1515 na foduru nke mgbidi ochie, nke ndị Ọnụ ụzọ Kraịst nke Burgos. Ma nnukwu ihe ncheta nke obodo bụ obí salinas, ihe ịchọ mma Renaissance bụkwa nke a na-akpọ Gil de Hontañón.
Horcajuelo nke Sierra
Echiche nke Horcajuelo de la Sierra
Obere obodo a dị na Sierra de Madrid pụtakwara iche maka ihe owuwu ọdịnala ya, n'ihe banyere nkume gbara ọchịchịrị. Na mgbakwunye, ọ bụ ebe dị mkpa nleta na ya chọọchị San Nicolás de Bari, ya na facade nke Mudejar ya, akara baptism oge ochie ya na ebe ịchụàjà Baroque.
N'otu aka ahụ, ọ ga-eju gị anya na obere obodo dị otú ahụ site na ịdị adị nke a nolọ ihe ngosi nka nke agbụrụ. Ma o nwere ọbụna a n'ụzọ zuru okè weghachiri eweghachi forge na ịnyịnya shoeing. N'ikpeazụ, na gburugburu obodo bụ Hermitage of Our Lady of Sorrows.
La Hiruela, otu n'ime obodo kacha mma echekwara na Sierra de Madrid
Omenala architecture na La Hiruela
N'agbanyeghị ọnụ ọgụgụ ndị bi na ya pere mpe, obodo a bụ otu n'ime ndị echekwabara ya nke ọma ọdịnala ọdịnala, ya na nkume na adobe ụlọ. Ọ dịkwa mma ịga leta eweghachiri eweghachi igwe nri ntụ ọka, ụlọ nke Ụlọ Nzukọ Alaeze na ụlọ ndị ụkọchukwu na onye nkụzi.
Ma ihe ịmatakwu bụ apiary dị nso, ihe owuwu ọdịnala nke a kara aka maka inweta mmanụ aṅụ bụ nke dabeere n'osisi osisi oak nke nwere oghere nke e dobere n'obere mbadamba ma jiri okwuchi ma ọ bụ osisi kpuchie ya. Na mgbakwunye, ọmarịcha ụzọ njem nlegharị anya na-amalite site na La Hiruela nke ga-akpọrọ gị, dịka ọmụmaatụ, na ọmarịcha ọmarịcha. Montejo beech ọhịa.
N'ịbụ nke dị n'akụkụ ọwụwa anyanwụ, nke dị nso na mpaghara Guadalajara, El Berrueco nwere gburugburu mara mma. Nke Cabrera oke na itinye Mmiri mmiri El Atazar, ebe ị nwere ike ịme egwuregwu mmiri dị ka ịkwọ ụgbọ mmiri.
Obodo a nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ narị mmadụ asatọ bi nwekwara ọtụtụ ihe ọ ga-enye gị. N'ime ihe ncheta ya, ndị Chọọchị Santo Tomás Apostol, ya Romanesque Mudejar facade, na, ugbua na mpụga, na ụlọ nche Muslim, ụlọ nche e wuru na nkume nkume.
Mana, ikekwe, ihe kacha adọrọ mmasị banyere El Berrueco bụ ya Ụlọ ihe ngosi nka nke Mmiri na Hydrographic Heritage raara onwe ya nye ọtụtụ akụrụngwa hydraulic nke Sierra de Madrid. Tụkwasị na nke ahụ, ọ bụghị naanị ya nọ n'obodo ahụ. O nwekwara ihe ọzọ a raara nye na nkume omenala nke mpaghara ahụ.
Pilar Church na Garganta de los Montes
Anyị ga-emecha njem anyị nke ọmarịcha obodo ndị dị na Sierra de Madrid na-akwụsị na Garganta de los Montes, nke dị na ndagwurugwu Lozoya. Akwụsịla ileba ha anya ụlọ ugwu ọdịnala nke elu. A na-eji nkume gwakọtara ha na apịtị na okwute ma na-ejedebe n'obere anwụrụ ọkụ nke yiri mgbịrịgba.
Ma ị ga-ahụkwa ihe ncheta dị ka ụka nke Santiago Apóstol na Nuestra Señora del Pilar, na Hermitage nke Our Lady of the Meadows na inyinya maka ịkpụ akpụkpọ ụkwụ. Ọzọkwa, akwụsịla ịbịaru nso Mirador, nke ị ga-enweta echiche dị egwu nke ndagwurugwu Lozoya.
Otú ọ dị, ihe kachasị adọrọ mmasị banyere Garganta de los Montes bụ ihe oyiyi ndị a na-ekesa n'okporo ámá ya na nke ahụ na-anọchi anya ihe ngosi nke ndụ kwa ụbọchị nke obodo ahụ. N'ime ha, nke nna nna na nwa nwa na-ekerịta ahụmahụ, nke altarera ma ọ bụ nke onye obodo na-enyocha ndagwurugwu ahụ.
N'ikpeazụ, anyị agwala gị gbasara ya obodo mara mma na Sierra de Madrid. Ha niile bara uru nleta gị. Ma e nwere ndị ọzọ dị oké ọnụ ahịa otú ahụ. Ọmụmaatụ, Puebla de la Sierra, nke ka na-echekwa isi iyi Arab; Grove nke Real, ya na ụka baroque nke Immaculate Conception na àkwà mmiri Romanesque ya; Guadarama, ya na-ahụkarị Plaza Mayor, ma ọ bụ Cercedilla, ya na chọọchị ya nke San Sebastián. Gaa n'ihu mata obodo ndị a ma nwee ọ enjoyụ n'ahụmahụ ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » España » Obodo mara mma na Sierra de Madrid
Ndụmọdụ maka njem na Riviera Maya